Sales & Marketing Manager Archives - Glory Assumption Space
Sales & Marketing Manager – Female - (5) Posts /လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁) Sales & Marketing Manager – Female - (5) Posts /လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် / သင်္ဃန်းကျွန်းမြှိုနယ် ။ • ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ • Sales & Marketing နှင့်ပတ်သက်သည့် Diploma ရရှိထားသူဖြစ်ရ မည်။ • အသက် ( ၄၀ ) နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ • Computer ( Word,Excel,Internet & Email ) အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ • English (4) Skills fluent ရရမည်။ • FMCG ပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၅ ) နှစ်ရှိရမည်။ • ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ • ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ရမည်။ • သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် ရှိသော Distribution Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါ ရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါ ရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Manager – Male (5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်။
1.	Sales & Marketing Manager – Male (5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်။ •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	အသက် (၃၅ - ၄၀)နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည်။ •	English (4) Skills တတ်ကျွမ်းသူဖြစ်ရမည်။ •	Sales & Marketing Manager ရာထူးဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၅)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ •	Marketing Plan ရေးဆွဲနိုင်ပြီး၊ လက်တွေ့ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Sales Target များအားပြည့်မှီအောင်ရောင်းချနိုင်ရန်အတွက် Sales Team အား ဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အလုပ်ချိန် မနက် (၈) နာရီခွဲမှ ညနေ (၅) နာရီခွဲအထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ •	ယူနီဖောင်းရှိသည်။ •	တနင်္ဂနွေနှင့် အခါကြီးရက်ကြီးများသာ ပိတ်သည်။ •	ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ကားမှုတ်ဆေးများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသော Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ကားမှုတ်ဆေးများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသော Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales & Marketing Manager – Male (5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)
1.	Sales & Marketing Manager – Male (5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်။ •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	အသက် (၃၅ - ၄၀)နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည်။ •	English (4) Skills တတ်ကျွမ်းသူဖြစ်ရမည်။ •	Sales & Marketing Manager ရာထူးဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၅)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ •	Marketing Plan ရေးဆွဲနိုင်ပြီး၊ လက်တွေ့ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Sales Target များအားပြည့်မှီအောင်ရောင်းချနိုင်ရန်အတွက် Sales Team အား ဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အလုပ်ချိန် မနက် (၈) နာရီခွဲမှ ညနေ (၅) နာရီခွဲအထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ •	ယူနီဖောင်းရှိသည်။ •	တနင်္ဂနွေနှင့် အခါကြီးရက်ကြီးများသာ ပိတ်သည်။ •	ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ကားမှုတ်ဆေးများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသော Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ကားမှုတ်ဆေးများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသော Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales & Marketing Manager ( MDY) – Female - (5) Posts /လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁) Sales & Marketing Manager ( MDY) – Female - (5) Posts /လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် /မန္တလေးမြို့ ။ Requirements • Any Graduate /MBA ဘွဲ့ရထားသူဖြစ်ရမည်။ • အသက် ( ၃၅ ) မှ ( ၄၀ ) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ • English (4) Skills တက်ကျွမ်းသူဖြစ်ရမည်။နယ်ခရီးများသွားလာနိုင် ရမည်။ • Sales Plan /Marketing Plan/Sales Target များဆွဲနိုင်၊ချပေးနိုင် သူဖြစ်ရမည်။ • Supervisor Level /Executive Level ဖြင့် ( ၅ ) နှစ်အထက်လုပ်ကိုင် ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ • Manager Level ဖြင့် ( ၅ ) နှစ်ဝန်းကျင်လုပ်ကိုင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ • စုစုပေါင်းလုပ်သက် ၁၅ နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ • Computer ( Word,Excel)ကျွမ်းကျင်ရမည်။ • မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းကျွမ်းကျင်စွာခရီးသွားလာနိုင်ရမည်။ • Trading /Distribution နယ်ပယ်မှဖြစ်ရမည်။သွက်လက်ချက်ချာပြီး ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိရမည်။ • ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ • လူအများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး လက်အောက်ငယ်သားများကို Train နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ရေရှည်လက်တွဲ လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ • မန္တလေးရုံးခွဲတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မန္တလေးမြို့ တွင်ရှိသော Trading Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါ ရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါ ရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ ) [caption id="attachment_2237" align="alignnone" width="569"] Concept image of Sales & Marketing onasignpost againstamodern glass office building.[/caption]
Sales & Marketing Manager – Male/Female - (5) Posts /လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ကျပ် (အထက်)
၁) Sales & Marketing Manager – Male/Female - (5) Posts /လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ကျပ် (အထက်) /လှိုင်မြို့နယ် ။ Job Requirement 3+ years marketing experience inaManager role Age Between (27 to 35) Excellent communication and people skills Bachelor Degree Positive Attitude and good at team working Competency in Microsoft applications including Word, Excel. Job Description Creativity and commercial awareness Conceive and develop efficient and intuitive marketing strategies Organize and oversee advertising/communication campaigns exhibitions and promotional events Conduct market research and analysis to evaluate trends, brand awareness and competition ventures Initiate and control surveys to assess customer requirements and dedication Write copy for diverse marketing distributions (brochures, press releases, website material etc.) Maintain relationships with media vendors and publishers to ensure collaboration in promotional activities Monitor progress of campaigns using various metrics and submit reports of performance Good understanding of market research techniques, data analysis and statistics methods Prepare and monitor the marketing budget onaquarterly and annual basis and allocate funds wisely Reporting to Executive Director (Sales & Marketing). Benefit Ferry or Traveling Allowance Lunch Provide Phone Bill Provide GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်မြို့နယ်တွင်ရှိသော Construction Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ ) [caption id="attachment_2237" align="alignnone" width="569"] Concept image of Sales & Marketing onasignpost againstamodern glass office building.[/caption]
Sales & Marketing Manager - Female - (5) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် နှင့်အထက် / သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်
Salary Rang : 800000 Above
Sales & Marketing Manager - Female - (5) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် နှင့်အထက် / သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ။ • FMCG ပိုင်းတွင် Sales & Marketing Manager ရာထူးဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၅ ) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • English စာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • Sales & Marketing နှင့်ပတ်သက်သော Certificate ( or ) Diploma ရရှိထားသူဖြစ်ရမည် ။ • အပြင်ထွက်သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန်မနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၆း၀၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • စနေ တစ်ပတ်ခြား ၊ တနင်္ဂနွေ နှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည် ။ • သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ရှိ FMCG Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောာင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ရှိ FMCG Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 ,09263121101, 09958103983, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Manager – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) / မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်
Sales & Marketing Manager – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) / မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၅ ) နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • Computer ( Word , Excel , Internet , Email ) ရရမည် ။ • Pharmacy ပိုင်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • အသက် ( ၃၀ ) နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်သူဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်လိုအပ်ချက်အရ နယ်ခရီးသွားနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • ရန်ကုန်လမ်းကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • English4skills ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိ်န် မနက် ၈း၃၀ နာရီ မှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • စနေနေ့တစ်ဝက် ၊ တနင်္ဂနွေ နှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည် ။ • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Medical Device Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Medical Device Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ ) [caption id="attachment_7042" align="alignnone" width="512"] Businesspeople havingabusiness meeting[/caption]
Sales & Marketing Manager – Male - (5) Posts / လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် / သာကေတမြို့နယ်
Sales & Marketing Manager – Male - (5) Posts / လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် / သာကေတမြို့နယ် ။ • တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည် ။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • Computer Skills ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည် ။ • Management & Leadership Skill ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည် ။ • သက်ဆိုင်ရာ Certificate ( or ) Diploma ရရှိထားသူဦးစားပေးမည် ။ • Customer Relationship & Customer Complain အထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည် ။ • Way Pay & Marketing Plan တိကျစွာဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • Monthly Sale Target ပြည့်မှီအောင်ရောင်းချနိုင်ပြီး အထက်လူကြီး၏ ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၈း၃၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၃၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည် ။ • သာကေတမြို့နယ် ရှိ FMCG Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော သာကေတမြို့နယ် ရှိ FMCG Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Manager – Male (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)
1.	Sales & Marketing Manager – Male (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	English အသင့်အတင့်ကျွမ်းကျင်ရမည်။ •	အသက် (၄၀)နှစ် ၀န်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ် ရှိရမည်။ •	လိုအပ်ပါက နယ်ခရီးသွားနိုင်သူဖြစ်ရမည် •	အလုပ်ချိန် ( 9:00 AM – 5:00 PM ) •	ဖယ်ရီရှိသည်။ ယူနီဖောင်းရှိသည်။ •	တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုအပေါ် မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ Fibre Companyကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales & Marketing Manager ( Steel Structure )- Male - (5) Posts - လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( အထက် )( ညှိနှိုင်း )
Location in : East Dagon
၁)Sales & Marketing Manager ( Steel Structure )- Male - (5) Posts - လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( အထက် )( ညှိနှိုင်း ) - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် ။ - Steel Structure အရောင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ( ၅ ) နှစ်ရှိရမည်။ - ပညာအရည်အချင်း Engineering ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည် ။ - Steel Structure Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone Number - 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales and Marketing Manager (Construction) – Female - (5) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မြောက်ဥက္ကာလာမြို့နယ်
၁) Sales and Marketing Manager (Construction) – Female - (5) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မြောက်ဥက္ကာလာမြို့နယ် ။ (အင်တာဗျူး အမြန်ဝင်ရမည်။) (Construction ကုမ္မဏီကြီးမှ ခေါ်ယူသောတိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးအမြန်ဝင်ရမည်။) • Construction Sales and Marketing ပိုင်းန နှင့် လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၅) နှစ်ရှိရမည်။ •Construction Field ပိုင်းတွင် Experience လုံးဝရှိသူဖြစ်ရမည်။ • တက္ကသိုလ်တခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ •Sales and Marketing Diploma or Certificate တခုခုရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ •Foreignerများနှင့် ကောင်းမွန်စွာ communicate ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ •English စာကျွမ်းကျင်စွာ ပြောဆိုနိုင်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် (8:00 AM to 5:00PM) • စနေ တပတ်ခြား , တနင်္ဂနွေနေ့ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည် ။ •မြောက်ဥက္ကာလာမြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • Construction Company ကြီး တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျှောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါ တည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကေ်ာင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Manager - Female - (5) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်
၁) Sales & Marketing Manager - Female - (5) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ။ REQUIREMENT • MBA (Marketing & Sales), with 5-7 year experience field sales experience and demonstrated level s of performance across varied situations • Exposure to brand management,adistinct advantage • Experience in similar industry and in-depth product knowledge • Good working knowledge of computers • Leadership/Managerial Skills • Strategic thinking, Good Leadership, Strong Analytical skills • Age between 30 to 35 and Female candidate . • Strongly English Language Skill GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် တွင်ရှိသော နိုင်ငံခြားဖက်စပ်သစ်လုပ်ငန်းနှင့် အဆောက်အဦး အဌားများပြုလုပ်သည့် Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
၁) Sales and Marketing Manager – Female - (5) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မြောက်ဥက္ကာလာမြို့နယ် ။
၁) Sales and Marketing Manager – Female - (5) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မြောက်ဥက္ကာလာမြို့နယ် ။ (အင်တာဗျူး အမြန်ဝင်ရမည်။) (Construction ကုမ္မဏီကြီးမှ ခေါ်ယူသောတိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးအမြန်ဝင်ရမည်။) • Construction Sales and Marketing ပိုင်းန နှင့် လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၅) နှစ်ရှိရမည်။ •Construction Field ပိုင်းတွင် Experience လုံးဝရှိသူဖြစ်ရမည်။ • တက္ကသိုလ်တခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ •Sales and Marketing Diploma or Certificate တခုခုရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ •Foreignerများနှင့် ကောင်းမွန်စွာ communicate ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ •English စာကျွမ်းကျင်စွာ ပြောဆိုနိုင်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် (8:00 AM to 5:00PM) • စနေ တပတ်ခြား , တနင်္ဂနွေနေ့ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည် ။ •မြောက်ဥက္ကာလာမြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • Construction Company ကြီး တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျှောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါ တည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကေ်ာင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
၁) Sales & Marketing Manager – Female - (5) Posts /လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( အထက်)/ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။
၁) Sales & Marketing Manager – Female - (5) Posts /လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( အထက်)/ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ • Degree holder of any field ( Travel & Tourism related diploma preferred) • Minimum (5) years of experience in sales & marketing of high profile in hotel or resort industry. • Documentation Skills, Resolving conflict,Analyzing Information,Multi-tasking,Team work & Communication, Social Skill & Interpersonal Skill, Business Level English. • Age (Between 35 and 45) • Familiar with Social Media and Computerizing and Knowledge of Microsoft Office. • လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်ရှိသော Construction Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်ရှိသော Trading Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )